Nnyocha na-akwado oge ọkọchị kpọrọ nkụ na narị afọ ndị gara aga | Network Meteorology
Otu nnyocha na-akwado oge ọkọchị kpọrọ nkụ na narị afọ ndị gara aga
Na Spain oké ọkọchị bụ ihe okike pụtara ugboro ugboro na agbanyeghị na gburugburu Mediterenian. Ugboro na ike nke otu na-abawanye site na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na, ọ bụ ezie na ọrụ akụ na ụba na usoro okike emegharịala na njirimara a nke ihu igwe, ha enweghị ike ime nke a na ọnọdụ a, nke na-emetụta nkwado.
Ọnọdụ a nke oké ọkọchị na ihu igwe na-arị elu emewo ka ọ bụrụ oge ọkọchị na mmiri kacha ekpo ọkụ na narị afọ atọ gara aga n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Mmetụta dị a doesaa ka ọnọdụ a na-enwe?
1 Enwekwu ọkụ, obere mmiri
2 Ọmụmụ banyere uto osisi
Enwekwu ọkụ, obere mmiri
Ruo afọ iri abụọ, ndị otu so na ndị otu nyocha ahụ Ihu igwe, Mmiri, Mgbanwe ụwa na usoro okike nke Ngalaba Geography na Atụmatụ gbasara ohere ha na-ewugharị ihu igwe nke oge gara aga site na nchapụta nke osisi kacha ochie na Spain. Site na nyocha a ha chọrọ ịmata otu ihu igwe dị na narị afọ ndị gara aga ma nwee ike ịkọwa oke na ọganihu nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na ọtụtụ mgbanwe ihu igwe emeela n'akụkọ ihe mere eme, mana ha adịbeghị ngwa ngwa dị ka nke na-eme taa. Maka mmụba na ogo okpomọkụ dịka nke dị taa, ọtụtụ nde afọ gafere. Agbanyeghị, mgbanwe ihu igwe ugbu a na-eme n'usoro mmadụ, ya bụ, n'ime narị afọ ole na ole.
Enwere ike inweta ozi a site na ịmụ banyere radial nke osisi dị ka pines. Akwụkwọ akụkọ Geophysical Research Letters na-achịkọta nyocha nke ugbu a ihe atụ sitere na osisi 774 nke ụdị Pinus sylvestris na Pinus uncinata nke dị na oke ugwu Iberian, ebe ọ bụ na ogologo nke ihe ndekọ ihu igwe dị egwu (data a tụrụ na ọdụ ihu igwe) ruru afọ 100 kachasị mma, oge ezughi ezu iji nyochaa enweghị ike nke ihu igwe dị ugbu a.
Ọmụmụ banyere uto osisi
N'ihi ozi anakọtara site na nha nke uto nke osisi, ọ ga-ekwe omume ịmata otu ihu igwe si amalite. Mgbe osisi ọ bụla na-eto eto mbubreyo, ya bụ, ọchịchịrị kachasị njọ nke na-eme n'oge ikpeazụ nke uto kwa afọ, ọ ga-ekwe omume wughachi mmetụta nke oké ọkọchị N'oge ọkọchị kemgbe iri afọ mbụ nke narị afọ XNUMX.
Ọrụ amalitela na oge okpomọkụ nke narị afọ nke XNUMX kemgbe ọ bụ mmalite nke mgbanwe ọrụ ụlọ ọrụ ebe ikuku gas na-ekpo ọkụ malitere site na mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọ bụ oge mbụ ndị sayensị nwere ike ịmegharị ihu igwe nke narị afọ gara aga n'ụzọ a. A na-akpọ usoro ahụ Nzuzo Evaporation na Ntughari Ntughari (SPEI), zoro aka na nke a na ọnwa nke July na August. Oge ọkọchị akpọrọ nkụ ruo taa, ha bụ ndị na-edekọ akụkọ ihe mere eme.
Ihe a na-elebara anya na mmụba ndị a na nke dị mkpa maka nkwadebe nke nsonaazụ na nkwubi okwu bụ na ndeksi a na-eji na nha elebara mgbakasị nrụgide nke usoro okike nwere anya ma ọ bụrụ na enwere ike ịdị njọ na mmiri ozuzo. na gburugburu nke, n'ihi okpomoku ụwa, okpomọkụ kwa afọ na-arịwanye elu.
Nsonaazụ ndị enwetara enwetala ndị ọzọ sitere na Europe na North Africa gosipụtara, ndị na-ezo aka na oke oke oke ọkọchị nke mere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na ndị na-eme ugbu a na njedebe ikpeazụ afọ.
Mgbanwe nke usoro ikuku maka mgbanwe ihu igwe na-arụ ọrụ n'ọtụtụ buru ibu ma nwee ike gbanwee ọnọdụ na nnọgidesi ike nke Anticyclone na Azores nke ahụ anaghị ekwe ka ebili mmiri banye Spain na, ya mere, mmiri ozuzo. Ọzọkwa, nlọghachi a ka elu nke ihe akọrọ dị na nsonaazụ nke akụkọ kachasị ọhụrụ nke ngalaba gọọmentị etiti banyere mgbanwe ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Otu nnyocha na-akwado oge ọkọchị kpọrọ nkụ na narị afọ ndị gara aga
Oké ifufe Bruno rutere Spain, nke mbụ n'oge oyi
November 2017 bụ nke ise kachasị ekpo ọkụ na ndekọ